पूर्वयुवराज पारस शाहको स्वास्थ्यमा समस्या, चितवनमा उपचार हुँदै,,,,स्वास्थ्य लाभको कामना! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
पूर्वयुवराज पारस शाहको स्वास्थ्यमा समस्या, चितवनमा उपचार हुँदै,,,,स्वास्थ्य लाभको कामना!
चितवन– पूर्वयुवराज पारस शाहको छातीमा समस्या आएपछि अस्वस्थ हुनुभएको छ । नारायणगढस्थित एक होटलमा मङ्गलबार साँझ आएर बस्नुभएका शाहलाई आज साँझबाट छातीमा समस्या देखिएको हो।
शाह बिरामी भएपछि चितवन मेडिकल कलेजका मुटुरोग विशेषज्ञ डा श्यामराज रेग्मीसहितको चिकित्सक टोलीले परीक्षण शुरु गरेको छ ।
रेग्मीका अनुसार, उहाँलाई होटलमै इसिजी गरिँदै छ । यसैगरी रगत परीक्षण गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रेग्मीले भन्नुभयो, “उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर इसिजीलगायत परीक्षणका लागि हामी अस्पताल आएका छौँ ।
उहाँको अवस्थाका बारेमा केही बेरपछि भन्न सकिन्छ ।” इसिजी र रगत परीक्षणको नतिजा आएपछि छातीको समस्याबारे यकिन हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।रेग्मीका अनुसार शाहमा मुटुसम्बन्धी पुरानै समस्या रहेको थियो । सोही समस्या बल्झिएको अनुमान चिकित्सकले गरेका छन् ।
Previous “सम्मानिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजिनामा दिने तयारीमा आयो यस्तो खबर हेर्नुहोस
Next चर्चित सञ्चारकर्मी रबी लामिछाने प्रस्तोता भएका चर्चित कार्यक्रम सिधाकुरा जनतासँगका प्रोड्युसर दिपक बोहोरालाई कोरोना पुष्टि!